laacib » Barcelona Oo Tubta Guusha Ku Soo Laabtay Iyada Oo Toban Ciyaartoy Oo Villarreal Ah Soo Garaacday Iyo Lionel Messi Oo Barbareeyay Rekoodhkii Taariikhiga Ahaa Ee Gerd Müller.
Barcelona Oo Tubta Guusha Ku Soo Laabtay Iyada Oo Toban Ciyaartoy Oo Villarreal Ah Soo Garaacday Iyo Lionel Messi Oo Barbareeyay Rekoodhkii Taariikhiga Ahaa Ee Gerd Müller.
Barcelona ayaa dib ugu soo laabtay tubta guusha kadib markii ay 2-0 ku soo garaacday toban ciyaartoy oo Villarreal ah iyada oo qaybtii danbe kaadhka cas oo toos ah loo taagay Dani Raba kaas oo qalad xun ku galay Sergio Busquets. Waxaa Barcelona guushan ku soo hogaamiyay Luis Suarez iyo Lionel Messi oo min hal gool dhaliyay iyada oo Barca iska caabin wayn kala kulantay laacibkii martida loo ahaa ee Villarreal.
Barcelona ayaa dib u soo ceshatay shantii dhibcood ee ay Valencia hogaanka La Liga kaga haysay iyada oo yeelatay 39 dhibcood halka Valencia oo kaalinta labaad ku jirtaa ay 34 dhibcood leedahay waxaana kaalinta saddexaad ku soo laabatay Atletico Madrid oo leh 33 dhibcood.
Kaydka:Cillessen, Nelson Semedo, Paco Alcacer, Digne, Andre Gomes, Vidal, Costas.
Kaydka: Barbosa, Marin, Samu Castillejo, Rukavina, Bonera, Guerra, Chuca.
Barcelona ayaa kulankan ciyaaraysay iyada oo uu cadaadis ku saarnaa in Valencia ay laba dhibcoodo oo kaliya u soo jirsatay isla markaana ay Real Madrid guul wayn oo digniin ah u ku biixsay kulankii Sevilla wuxuuna Valverde dib ugu soo laabtay kooxdisii hore ee Villarreal isaga oo doonayay in kadib babrarihii kulamadii Valencia iyo Celta Vigo uu kooxdiisa dib ugu soo celiyo tubta guusha.
Laakiin Villarreal ayaa iska caabin wayn kala hor timid Barcelona iyada oo qaybtii hore ka dhigtay kulan ay labada kooxood isku dheeli tirnaayeen iyada oo waliba Villarreal ahayd laacibkii inta badan tijaabisay goolhaye Ter Stegan balse Barca ayaa ahayd laacibkii inta badan kubbada haysay ee fursado ku raadinaysay goolka Villarreal.
Villarreal ayaa qaybtii hore ee ciyaarta muujisay hanaan ciyaareed oo cajiib ah iyada oo aan difaac buuxa galin balse si buuxda u kala raacanaysay ciyaartoyda Barce markasta oo ay doonayaan in ay weerar qaadaan waxayna difaacooda dib ugu dagayeen marka ayna kubbada haysan ee ay Barca weerarka tahay halka ay fursado aad u fiican ku abuureen weeraro deg deg ah.
DAQIIQADII 54 AAD BIRTA GOOLKA! Barcelona ayaa ugu dhawaatay in ay goolka furitaanka hesho isla bilawgii ciyaarta kadib markii uu Gerard Pique u muuqday in uu dhaliyay goolkan laakiin nasiibka difaaca ree Spain ayaa xumaaday kadib markii ay darbadiisu birta goolka Villarreal ku dhacday.
DAQIIQADII 7 AAD Villarreal ayaa heshay fursad fiican iyada oo Raba uu markii ugu horaysay tijaabiyay goolhaye Marc-Andre ter Stegen oo kulankan qaybtiisii hore shaqo fiican qabtay laakiin Barca ayaa markiiba bilawday in ay jawaab celiso laakiin ciyaarta ayaa markiiba noqotay mid adag oo aan sahlanayn.
DAQIIQADII 16 aad Villarreal ayaa heshay fursad layaableh kadib markii uu Roberto Soriano kubbad qaab laba lugoodley ah uu ugu dhawaaday in uu goolka furitaanka ciyaarta ku dhaliyo laakiin ma rumaysan kartid qaabka uu Ter Stegen gacanta bidix oo kaliya uu ugu awooday in uu darbadan ku joojo si uu gool cadaan ah uga horjoogsado Villarreal.
Intaa wixii ka danbeeyay ciyaarta ayaa noqotay mid xidh xidhan oo ay koox kastaaba ay lug cabsi ugu taagan tahay lugna dagaal si ayna wax qaladaad ah uga samayn difaaca waxaana jiray fursado fiican oo labada dhinac ah balse aan wax isbadal ah keenin. Waxaana qaybtii hore lagu kala nastay barbaro gool la’aan ah.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii danbe ee ciyaarta ayay Barcelona soo laabtay iyada oo maanka ku haysay xaalada xun ee ay sii dhexgali kartay haddii ayna shaqo wayn qaban 45 kii daqiiqo ee ciyaarta uga hadhsnaa balse Villarreal ayaa markale soo laabtay iyada oo sii xoogaysatay.
Valverde ayaa markii uu isbadal ciyaarta ka dareemi waayay waxa uu daqiiqadii 58 aad kaydka uga yeedhay Paco Alcácer isaga oo ciyaarta ka saaray Denis Suarez waxayna Barca sii waday qaabka gaabiska ahaa ee ay goolka ku raadinaysay.
DAQIIQADII 6AAD KAADHKA CAS OO TOOS AH! Villarreal ayaa dhibaato la kulantay kadib markii uu Dani Raba naftiia iyo kooxdiisa halis ku galayay qalad wayn oo uu Sergio Busquets cirkaga kaga soo riday isaga oo garsooraha u diiday wax kala dooraasho ah laakiin Dani Raba ayaa markiiba sii fahmay in waqtigiisii ciyaartu sii dhamaaday waxaana Villarreal lagu soo yareeyay 10 ciyaartoy.
Laakiin Villarreal ayaa wali sii waday in ay Barcelona difaacasho adag xaalada ugu adkayso waxayna Barca wali u muuqatay kuwo aan dhaafi karin difaaca Villarreal ee ay dib ugu sii wada degtay wuxuuna Valverde ciyaarta ka saaray Pualinho isaga oo kaydka uga yeedhay Aleix Vidal si uu garabka midig ee weerarka uga ciyaaro.
DAQIIQADII 67 AAD BIRTA GOOLKA Luis Suarez ayaa u muuqday in uu dhaliyay goolka dhibaataa wayn ku ahaa Barca laakiin kubbad uu si isku soo tuuray ayuu birta goolka ku garaacay waxayna ahayd fursad gool loo fishay.
Lionel Messi ayaa markiisa birta goolka wax yar u mariyay darbo kale oo loo fishay goolka waqtiga dheer la sugayay laakiin markan Villarreal ayaa culays wayn dareentay waxayna noqotay Barca oo weerar ah iyo Villarreal oo goolkeeda xidhatay.
DAQIIQADII 72 AAD Barcelona ayaa ugu danbayn jabisay iska caabintii Villarreal iyada oo Luis Suarez uu u saxiixay goolka ay dadaalka badan ku soo bixiyeen waxaana kubbad min hal taabasho ah isla soo ciyaaray Busquets, Messi, Paco Alcácer oo caawinta lahaa iyo Suarez oo dhamaystirka lahaa waxayna ciyaartu noqotay 1-0 ay Barca hoganka ugala wareegtay 10 ciyaartoy oo Villarreal ah.
DAQIIQADII 76 AAD Villarreal ayaa si laayableh ciyaarta ugu soo laaban gaadhay kadib markii uu Manu Trigueros tuuray darbo aan la rumaysan karin awooda ay ku socotay laakiin goolhaye Ter Stegen ayaa awooday in uu dhinac iskaga leexiyo waxayna ahayd waqti aad muhiim ugu ahayd laacibkii Valverde.
DAQIQIIQADII 83 AAD Lionel Messi ayaa ciyaarta hurdada ugu diray gool laayableh oo uu isakga dhex baxay difaacyada Villarreal ee Alvaro Gonzalez iyo Victor Ruiz oo halkii ay Messi celin lahaayeen iyagu isku dhacay wuxuuna xidiga ree Argentina cidlo ugu soo baxay goolka Villarreal isaga oo darbo xoogan ku dhaliyay goolka labaad ee ciyaarta wuxuuna natiijada u badalay 2-0 ay Barca hogaanka ugu dheeraysatay.
Lionel Messi ayaa goolkan ku barbareeyay rekoodhkii abid ee ciyaartoy uu koox goolasha ugu badan u soo dhaliyay isaga oo yeeshay 525 gool oo uu Barcelona u soo dhaliyay wuxuuna la mid noqday halayygii Bayern Munich ee Muller kaas oo rekoodhkan waqti dheer haystay.
Barca ayaa fursado badan heshay dhamaadkii ciyaarta oo ay goolal kale kula iman kartay balse Villarreal ayaa dhibaato wayn u martay qaladkii uu xidiga kooxdeeda ee Dani Raba uu casaanka tooska ah ku qaatay iyada oo xaalada si wayn ugu xumaysay Barca balse ugu danbayn Villarreal ayaa lumisay ciyaarta.
Ugu danbayn ciyaarta ayaa ku dhamaatay 2-0 ay Barcelona guul kaga soo gaadhay toban ciyaartoy oo Villarral ah waxayna dib u soo ceshatay shantii dhibcood ee ay hogaanka La Liga kaga haysay Valencia.